Himalaya Dainik » अस्पतालको शैय्याबाट नख्खु बम बिस्फोटकी घाइते प्रतिक्षाले यसो भनिन् !
अस्पतालको शैय्याबाट नख्खु बम बिस्फोटकी घाइते प्रतिक्षाले यसो भनिन् !
शुक्रबार राती ८ बजे ललितपुरको नख्खुमा रहेको एनसेलको नेपालस्थित मुख्यालयको गेटमा बम बिस्फोट भयो । बिस्फोटमा परी घाइते भएका ३ जना मध्ये एकजना सिंहबहादुर गुरुङको उपचारका क्रममा मृत्यु भयो । सामान्य घाइते भएका प्रतिक्षा खड्का र आरुसा मानन्धरको उपचार भइरहेको छ ।
शुक्रबार राती घर जाने क्रममा श्रीमानसँगै मोटरसाइकलको पछाडि रहेकी प्रतिक्षाको पछाडिको भागमा बमको छर्रा घुसेको थियो । उनले घर पुग्दा जिउबाट रगत बगेको देखेपछि मात्र यसबारे चाल पाएकी थिइन् । उनले सानो घाउ होला भनेर सोचेकी थिइन् तर शरीरको पछाडिको भागमा ठूलो प्वाल नै परेको थाहा पाइन् ।
सुरुमा अल्का अस्पतालमा गएको र त्यहाँ उपचार हुन नसकेपछि मेडिसिटी अस्पतालमा आएर उपचार गरेको उनले बताइन् । उनको शरीरबाट बमको लामो टुक्रा निकालिएको छ ।उनी बम बिस्फोट भएको ठाँउभन्दा केही पर थिइन् । ठूलो आवाजसँगै बाक्लो धुवाँ उडेको आफूले देखेको प्रतिक्षाले बताइन् ।
उपचार गराइरहेकी खड्काले यसरी घटना गराउनेलाई सर्वसाधारणलाई दुःख दिने गरी बम बिस्फोट नगराउन आग्रह गरिन् । उनले भनिन्–‘यसरी बम राखेर सामान्य मान्छेलाई दुःख दिएर हुँदैन, मान्छेले काम गरेर खानुपर्ने हुन्छ, यसरी हस्पिटलाइज्ड हुनुपरेपछि समस्या आउँछ ।’
घाइते दुई जना खतरामुक्त रहेकोले छिट्टै डिस्चार्ज हुने अस्पतालले जनाएको छ ।